“Mommɔ Ɔhene no ne N’ahenni no Ho Dawuru!”
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
FIDA anɔpa, September 1922 no, na wim ayɛ hyew dedaw. Saa bere no, na nnipa 8,000 akyere so wɔ asa kɛse bi so. Nhyiam no guamtenani no de too gua sɛ, dwumadi a wɔadu so no ho hia paa. Ɔde kaa ho sɛ, sɛ obi pɛ a, obetumi apue afi asa no so, nanso wɔremma no kwan mma ɔnsan mma asa no so bio.
Wɔtoo nnwom wɔ nhyiam no fã a edi kan a na wɔato din “Ayeyi Som” no mu. Ɛno akyi no, Joseph F. Rutherford kogyinaa akasam no anim. Ná atiefo dodow no ara te hɔ a wɔawɛn wɔn aso retwɛn nea ɔbɛka. Ná atiefo no kakraa bi a ɔhyew no ama wɔn ho yeraw wɔn asɔre nenam asa no so. Ɔkasafo no srɛɛ wɔn denneennen sɛ wɔntena ase ntie ɔkasa no. Ná wɔabobɔw ntama kɛse bi kama de asɛn soro wɔ asa no so. Yemmisa sɛ, bere a ɔkasa no fii ase no, obi hui sɛ ntama a ɛte saa sɛn hɔ anaa?
Ɔkasa a Onua Rutherford mae no asɛmti ne sɛ, “Ɔsoro ahenni no abɛn.” Onua Rutherford de bɛyɛ dɔnhwerew baako ne fã kyerɛkyerɛɛ sɛnea tete adiyifo no de akokoduru kaa Ahenni a na ɛreba no ho asɛm. Ɔrema ɔkasa no nyinaa, na ne nne a emu yɛ duru no regyigye asa no so. Bere a ɔde ɔkasa no reba awiei no, obisae sɛ, “So mugye di sɛ anuonyam Hene no afi ne nniso ase?” Atiefo no gyee so denneennen sɛ: “Yiw!”
Onua Rutherford de nne a emu yɛ duru kae sɛ: “Ɛnde monsan nkɔka asɛmpa no, O mo a moyɛ ɔsorosoroni Nyankopɔn mma! . . . Monhwɛ, Ɔhene no redi hene! Mo na moyɛ n’adawurubɔfo. Enti mommɔ, mommɔ, mommɔ Ɔhene no ne n’Ahenni no ho dawuru.”
Saa bere no, ntama a na wɔabobɔw sɛn soro no sansanee kama ma wohuu nkyerɛwee a ɛwɔ so no. Ná ɛka sɛ: “Mommɔ Ɔhene no ne Ahenni no Dawuru.”
Ray Bopp kae sɛ, “Atiefo no ani gyei kɛse.” Anna Gardner kae sɛ, atiefo no “bɔɔ wɔn nsam denneennen.” Fred Twarosh nso kae sɛ, “Atiefo no nyinaa sɔre gyinaa hɔ.” Na Evangelos Scouffas nso kae sɛ, “Ɛyɛɛ te sɛ nea tumi kɛse bi ama yɛn so afi yɛn nkongua so prɛko pɛ. Yɛn nyinaa sɔre gyinaa hɔ a na yɛn ani ataataa nusu.”
Ná atiefo a wɔwɔ nhyiam no ase pii reka Ahenni ho asɛmpa no dedaw. Nanso, asɛm a wɔtee saa da no ma wonyaa ahoɔden foforo a wɔde bɛka asɛmpa no. Ethel Bennecoff kae sɛ, bere a Bible Asuafo no fii nhyiam no ase kɔɔ fie no, na “nsi ne ahokeka ne ɔdɔ a ɛwɔ [wɔn] komam ayɛ kɛse sen kan no.” Saa bere no, na Odessa Tuck adi mfe 18. Bere a ofii nhyiam no ase kɔɔ fie no, na wasi ne bo sɛ obegye ɔfrɛ a ɛne sɛ, “Hena na ɔbɛkɔ?” no so. Onuawa no kae sɛ: “Ná minnim baabi a mɛkɔ, ɔkwan a mɛfa so akɔ, anaa nea merekɔyɛ. Nanso, ade baako a na minim ne sɛ, na mepɛ sɛ meyɛ sɛ Yesaia. Yesaia kae sɛ: ‘Mini, soma me.’” (Yes. 6:8) Ralph Leffler kae sɛ: “Ahenni no ho dawurubɔ a ɛnnɛ adu asase so nyinaa no, saa da titiriw no paa na efii ase ankasa.”
Ɛnyɛ nwonwa sɛ saa nhyiam yi a wɔyɛe afe 1922 wɔ Cedar Point, Ohio no abɛyɛ abakɔsɛm mu ade titiriw wɔ Onyankopɔn som mu! George Gangas kae sɛ: “Saa nhyiam no ma minyaa ɔpɛ a emu yɛ den sɛ meremma nhyiam baako mpo mpa me ti so da.” Na ɔnkae sɛ ɔmaa nhyiam bi paa ne ti so da. Julia Wilcox kyerɛwee sɛ: “Bere biara a wɔbɛka Cedar Point nhyiam a yɛyɛe afe 1922 no ho asɛm wɔ yɛn nhoma bi mu no, ɛma m’ani gye boro so. Bere nyinaa mepɛ sɛ meka sɛ: ‘Yehowa, meda wo ase sɛ woma minyaa hokwan kɔɔ saa nhyiam no bi.’”
Ɛda adi sɛ, ɛnnɛ, yɛn mu pii kae nhyiam bi a yɛkɔe. Ne titiriw no, yɛkae nneɛma bi a ɛsom bo a ɛkɔɔ so wɔ nhyiam no ase a ɛmaa anigye hyɛɛ yɛn koma ma. Ebia nea ɛkɔɔ so no ma yɛyɛɛ nsi, na yenyaa yɛn Nyankopɔn kɛse no ne ne Hene no ho dɔ a emu yɛ den. Sɛ yedwinnwen nneɛma a ɛte saa ho a, yɛn nso, ɛka yɛn koma ma yɛka sɛ, “Yehowa, meda wo ase sɛ woma minyaa hokwan kɔɔ saa nhyiam no bi.”
Ahyɛnsode a na Obiara Nnim Nea Ɛkyerɛ
Ná wɔakyerɛkyerɛw “ADV” asensɛn nhyiam no ase baabiara. Ná ebi sensɛn nnua so, adan ho, na na ebi mpo wɔ nhyiam no program so! Ná wɔn a wɔwɔ nhyiam no ase no pɛ paa sɛ wohu nea saa ahyɛnsode no gyina hɔ ma ankasa. *
“Ná nkrataa mfitamfitaa a wɔde nkyerɛwde tuntum akyerɛkyerɛw ADV wɔ so no bi sensɛn dua biara ho, ne ɔpon biara ano. Yebisaa nea nkyerɛwde no kyerɛ, nanso na ɛte sɛ nea obiara nnim nea ɛkyerɛ. Anaasɛ wonim mpo a, na wɔmpɛ sɛ wɔbɛka akyerɛ yɛn.”​—Edith Brenisen.
^ nky. 14 Ɛde besi nnɛ, obiara nnim baabi a saa ahyɛnsode no bi wɔ. Yenni ɛho mfonini biara wɔ yɛn Nneɛma Akorae hɔ de besi nnɛ.
Nea Ɛkɔɔ So a Obiara Anhu—Mpaebɔ Bi a Yehowa Tiei
Arthur ne Nellie Claus kɔɔ nhyiam no ase ntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya baabi pa atena. Arthur kae sɛ, “Ná mawɛn m’aso paa retie nea ɛrekɔ so no nyinaa.” Mpofirim ara na ne yam fii ase haw no. Ná onim sɛ sɛ opue a, wɔremma ɔnsan mma hɔ bio. Nanso, ɔde amemenemfe fii asa no so. Obi a ogye ahɔho bisaa Arthur sɛ: “Saa bere yi na worefi asa yi so?” Nanso, Arthur hui sɛ ɛsɛ sɛ opue.
Bere a Arthur san baa baabi a wɔreyɛ nhyiam no, ɔtee sɛ atiefo no rebɔ wɔn nsam denneennen wɔ asa no so. Arthur hwehwɛɛ baabi a obetumi agyina wɔ asa no akyi, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛte asɛm a wɔreka wɔ asa no so no. Onyaa baabi a ɔbɛfa aforo akɔ asa no atifi. Asa no tenten bɛyɛ anammɔn 16 (mita 4.8). Bere a oduu asa no atifi no, ohuu mpomma bi a wɔabuebue a hann fa hɔ kɔ asa no so.
Arthur huu anuanom bi wɔ asa no atifi hɔ a na wɔn ho yeraw wɔn. Ná wɔde wɔn ani afa mpomma no mu rehwɛ ɔkasafo no. Ná wɔama wɔn akwankyerɛ sɛ wontwitwa nhama bi mu wɔ bere koro mu mma ntama bi a wɔabobɔw nsansan. Nanso, na wohia sekan baako aka nea wɔwɔ no ho na ama wɔatumi atwitwa nhama no mu wɔ bere koro mu. Ná Arthur wɔ sekan a ano yɛ nnam hyɛ ne kotoku mu anaa? Ná ebi hyɛ ne kotoku mu, na ɛmaa anuanom no bo tɔɔ wɔn yam paa. Arthur ne anuanom no gyinagyinaa nhama no ho, na wɔtwɛnee sɛ wɔbɛte asɛm bi a na wɔadi kan aka akyerɛ wɔn no. Sɛ na wɔte sɛ Onua Rutherford aka “Mommɔ!” ne mprenu so pɛ a, na ɛsɛ sɛ wotwitwa nhama no mu.
Wɔn a na wɔwɔ asa no so saa bere no kae sɛ, ntama kɛse a wɔde kɔla mmiɛnsa akyerɛw so no sanee fɛfɛɛfɛ. Ná wɔayɛ Yesu mfonini ato mfinimfini.
Ɛno akyi no, anuanom a na wɔwɔ asa no atifi no ka kyerɛɛ Arthur sɛ, antweri bi na wɔforo kɔɔ asa no atifi. Nanso, wɔforo wiei ara na woyii antweri no fii hɔ. Ná wɔrennya obiara mma ɔmfa sekan no bi mmrɛ wɔn. Enti wɔbɔɔ Yehowa mpae sɛ ɔmma obi a ɔwɔ sekan mmra asa no atifi hɔ. Saa anuanom no kae sɛ, wogye di sɛ Yehowa na ɔfaa anwonwakwan so tiee wɔn mpaebɔ.